Medical Mhinduro Nezve CBD & Delta 8 THC
Kurapa Mibvunzo uye Mhinduro Nezve Delta 8 THC uye Delta 10 THC Kubva Kumativi Ewebhu
Chii chinonzi Delta 8 THC?
By Krissi Danielsson; Yakadzokororwa naNeha Pathak, MD musi waJuly 08, 2021
Chinyorwa Pakutanga Yakatumirwa https://www.webmd.com/mental-health/addiction/what-is-delta-8
Inofananidzwa Sei Neyakajairwa Marijuana (Delta-9-THC)?
Delta-8 Zviri Pamutemo?
Iwe Uchaedza Kwakanaka kune THC?
Delta-8 THC (kana Delta-8-tetrahydrocannabinol) chinhu chinowanzoitika chemakemikari chinodaidzwa kuti cannabinoid iyo inowanikwa mune zvidiki zvidiki mune hemp uye cannabis (mbanje) zvinomera. Kuzivikanwa kwaro kuri kuwedzera, uye iwe unogona kuiwana kwese kwese kubva kuzvitoro zvemashizha emashamba kusvika kune nyore masherufu ezvitoro.
Nei paine kudiwa kuri kukura kudaro kweDelta-8? Kune kutanga, chimiro chemakemikari chakafanana neyawo hama yake inozivikanwa, Delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC), musanganiswa mukuru wepfungwa unowanikwa mumbanje. Ndozvinoita kuti uwedzere "kumusoro."
Ose maviri Delta-8 uye Delta-9 mafomu eTHC. Asi kana vanhu vachitaura nezve THC, vanowanzoreva iyo Delta-9 inowanikwa munzvimbo dzakanyanya mbanje. Ose ari maviri anogadzira euphoric, fuzzy kunzwa, asi Delta-8 inokonzeresa yakasimba.
Muchokwadi, Delta-8 inowanzo kunzi "mbanje-lite" kana "kudya masora." Zvimwe zvakajairika THC mhedzisiro senge paranoia, kushushikana uye kukotsira zvakare zvakare kushoma simba.
Is Delta 8 THC Mutemo?
Chimwe chikonzero chekuwedzera kukurumbira kweDelta-8 ndechekuti, kusiyana zvakanyanya nemutemo THC, Delta-8 zviri pamutemo kushandisa mumatunhu mazhinji. Imhaka yekuti inoburitswa zvakanyanya kubva kune hemp-yakatorwa CBD, zviri pamutemo kurima kuyambuka US
Asi Delta-8 inogara munzvimbo yepamutemo yegrey. Hemp hunhu hunobva pane inonzi federal purazi bhiri (iyo Yezvekurima uye Nutrition Kuvandudza Mutemo we2018), iyo yakabvisa hemp uye zvigadzirwa zvaro kubva pane zvinyorwa zvezvinhu zvinodzorwa. Icho chikonzero: Hemp yakaderera THC mazinga (asingasviki 0.3%). Bhiri iri haritaure nezve Delta-8 chero kupi. Vanotsigira Hemp nevamwe vanoitengesa vakashandisa nzira iyi kushambadza zviri pamutemo zvigadzirwa zveDelta-8, kazhinji zvisina zvipingamupinyi zvezera. Nekuda kweizvozvo, ikozvino ndicho chigadzirwa chinokurumidza kukura kubva kuindasitiri yehemp. Unogona kutarisa mamiriro epamutemo ehurumende yako pano: https://redemperorcbd.com/is-delta-8-thc-legal-in-my-state/
Nekuti pane kushoma kwekutarisa kana kuyedzwa kwebhu pane izvo zvinopinda muDelta-8 zvigadzirwa, vemakemikari uye mamwe masayendisiti ane chekuchengetedza kuchengetedzeka. Zvigadzirwa zvakanyorwa seDelta-8 zvinogona kunge zvine zvakasviba, zvinosanganisira zvakakwirira zveTC. Nekuda kweizvozvo, dzakatenderedza gumi nemaviri matunhu, kusanganisira New York neCo
Unogona kutenga Delta 8 THC zvigadzirwa pamusoro pekambani panzvimbo dzemagasi, zvitoro zviri nyore, masora, uye zvitoro zvevape, uye online. Ivo vanotengeswa semagummies, macandi, Delta 8 vape makadhibhokisi, maoiri, tinctures, edibles, majoini, kana zvinwiwa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hapana mhando yemhando yezvinhu izvi zvigadzirwa uye yavo yemisanganiswa runyorwa. Zvakare zvakare nyore kuvhiringidza Delta-8 zvigadzirwa zveCDD, izvo zvisingakonzere kumusoro.
Delta 8 Gummies 59.99 Inotengeswa Ye 39.99 Dzvanya Pamufananidzo Kuti Ugadzirire 14-zuva remari-kudzoka garandi.
Iko kune zvakare kushomeka kwekutsvaga uye humbowo kana zvasvika kune Delta-8 kukanganisa kwehutano hwako hwese. Vanhu vazhinji vakataura - kunyanya kuburikidza nevezvenhau zvemapepanhau - kuti vanoshandisa Delta-8 pamwe chete nemishonga yavo yekurapa kuti vabatsire nekushungurudzika uye kushandisa zvinodhaka. Vashandisi vanoti Delta-8 inogona zvakare:
Deredza marwadzo ekurwadziwa
Simbisa hutano hwepfungwa
Dzivirira kurutsa panguva yekurapa kenza
Nekudaro, nyanzvi dzinoti mabhenefiti aya anowanzove emuromo uye pane kushomeka kwekutsvaga nezvekuti zvinokanganisa sei hutano hwako. Kungoti nekuti unogona kuzvitenga zvichibva pasherufu hazvireve kuti hazvina njodzi zvachose.
Vamwe vanhu vakataura mhedzisiro senge:
Inononoka kurova kwemoyo (bradycardia)
Kutsanya kwemoyo moyo (tachycardia)
Kuderera kweropa (hypotension)
Kana iwe ukaedza Delta-8 zvigadzirwa uye ukacherekedza chero eaya maitiro, taurira chiremba wako nekukurumidza. Kana iri emergency, fonera 911 kana musoro kuchipatara padhuze newe. Kana mwana akadya kana akafumurwa kune zvigadzirwa zveDelta-8, semagamu kana macandi, tora kurapwa nekukurumidza.
Zvinoenderana. Delta-8 chimiro che THC. Bvunzo dzezvinodhaka dzinowanzo tarisa maratidziro eDelta-9, asi Delta-8 inogona kuratidza sechakanaka kune THC. Kunyangwe iri Delta-8 kana Delta-9, vanhu vanoitawo zvakasiyana ne cannabinoids zvinoenderana nerudzi rwezvigadzirwa zvavanoshandisa uye kuti vanozvishandisa kwenguva yakareba sei.
Parizvino, yekutengesa weti mishonga yemadhiraini haina kusiyanisa pakati peakasiyana cannabinoids. Saka kana iwe uine bvunzo yemushonga iri kuuya, zviri nani kudzivirira Delta-8 zvigadzirwa.
WebMD Chirevo Chekurapa
Mhinduro dzechiremba Kubva Kutenderera Iyo Webhu Nezve CBD
pakutanga yakatumirwa pa. https://collegian.csufresno.edu/2020/10/8-common-questions-and-answers-about-cbd-and-medical-marijuana/#.YSV07vpKg2w
Nembanje yekuvaraidza neyekurapa ichiwedzera kuve mutemo mumatunhu epasirese, unogona kunge uchinetseka kuti nyika yako ichatevera riini uye riini. Nhaurirano yakakomberedza mbanje ichiwana kutapira kwakanyanya mumakore achangopfuura, vanhu vakapomhodza chimiro chavo kune hemp uye imwe yadzo inozivikanwa cannabinoids - cannabidiol (CBD).
Nehutano hwakakwana hunowedzera kuve hwakakurumbira uye hutsika hwecannabis hwakatekeshera munzvimbo inozivikanwa, pane mibvunzo yakawanda inotenderera pamusoro penzvimbo yecannabis munharaunda yeAmerica. Ramba uchiverenga kuti uwane mhinduro dzemimwe mibvunzo inowanzoonekwa nevanhu nezve mbanje yekurapa uye zvigadzirwa zveCDD.
Mumwe wemibvunzo yakajairika inomhanya mundangariro dzevanhu ndewekuti "Chii chinonzi CBD?" Vanhu vasingazive nezvayo uye vanoziva chete kuti zvinobva mugomba rinowanzo kuvhiringidza ne tetrahydrocannabinol (THC), inova iyo yepamusoro inokonzeresa cannabinoid inowanikwa mu mbanje.
Mubvunzo mukuru pane pfungwa dzevanhu nezve CBD zvigadzirwa ndezvekuti kana ivo vachakukwidza iwe kumusoro. Mhinduro yakapusa kune iyi kwete. Kunyangwe iri cannabinoid, hazviite kuti unzwe kumusoro nenzira yesora. Muchokwadi, zvinopesana neTHC.
Mbanje iri pamutemo padanho remubatanidzwa?
Mumakore mashanu apfuura, pakave nezvakawanda nyika dzinobvumidza mbanje yekurapa neyekuvaraidza. Shanduko iyi pamaonero esora yakapa vazhinji vanofarira cannabis tariro yekuti sora rinobvumidzwa pamutemo, asi izvi hazvisati zvaitika.
Kunyange nyika zhinji dzakanyoresa mbanje yekurapa pamwe nembanje yekuvaraidza, ichiri kusiri pamutemo padanho remubatanidzwa. Nekuda kweizvi, vazhinji vanamuzvinabhizimusi mumatunhu ane marijuana zviri pamutemo vanozeya zvekuenda kune canna-bhizinesi.
Kunyange paine buzz yakawanda, pachine vanhu vazhinji vasingazive nezve hutano hwekushandisa CBD. Cannabidiol inoshandiswa pazvirwere zvakawanda sekurwadziwa kusingaperi uye kutemwa nemusoro. Vanhu vanoishandisa zvakare mumusoro wenyaya maronda e psoriasis uye eczema nekuti inobatsira nekuzvimba. Dzimwe nyanzvi dzinototenda kuti inogona kuve yekurapa kunoshanda kwekushushikana uye kushushikana.
Unotora sei zvigadzirwa zveCDD?
Pane nzira dzakasiyana siyana dzekutora ichi chekuwedzera. Kunyangwe isingakwire kumusoro sezvinoita masora, vamwe vanhu vanosarudza kuipfunga senzira yekurapa kushushikana. Madonhwe eCDD anozivikanwa pakati pevanhu vanoishandisa kurapa arthritis uye kurwadziwa kusingaperi. Vamwe vanhu vanotoishandisa sechinhu chekubika mukubika kwavo semafuta emiriwo uye nzungu. Iwe unogona zvakare kuwana ichi chekuwedzera se tincture kana yemusoro salve.
4. Medicare inovhara CBD Zvigadzirwa here?
Mumwe mubvunzo wakajairika une vanhu ndewekuti "Medicare inovhara mbanje yekurapa here?" Sezvaunoverenga kare, mbanje ichiri zvisiri pamutemo padanho remubatanidzwa uye nekuti Medicare inishuwarenzi yeruzhinji sarudzo, haifukidze mbanje yekurapa.
Kutendeseka, unogona kunetseka kuwana inishuwarenzi mupi uyo anovhara yako mbanje kunyorerwa. Nekuda kwechinyadzo chakanangana nekushandisa mbanje, ingangove iri nguva makambani einishuwarenzi asati aenda ikoko. Naizvozvo, funga nezve mari yekunze-muhomwe usati washandisa chero mbanje yekurapa kana zvigadzirwa zveCBD.
5. Chii chinorayirwa mbanje yekurapa?
Kunyangwe hazvo kushandiswa kwembanje kwakafemerwa nevamwe, kunoshandiswa kurapa runyorwa rurefu rwezvirwere, zvimwe zvepanyama uye zvimwe zvepfungwa. Vanachiremba vanoishandisa kurapa schizophrenia, cancer, kuda kudya, kushaya hope, kufenda, mhasuru yemhasuru, uye marwadzo ekurapa.
Yakakura Spectrum CBD 79.99 iri Kutengeswa kwe49.99
Ndichakwanisa here kuwana basa kana ndikashandisa mbanje yekurapa?
Kunetsekana kukuru kwevarwere vari pamushonga wembanje ndeyekuti kana zvichakanganisa kukodzera kwavo basa. Mabhizinesi anotenderwa kuiongorora uye kuita kuti vanhu vasawane basa rekushandisa mbanje, kunyangwe mbanje yekurapa. Kana iwe uri kushandisa mbanje yekurapa pamba, saka chinhu chakanakisa chaungaite hauna kumbouya kuzoshanda zvakakwirira kana kurega pane izvo kuti unoshandisa mbanje.
CBD ine FDA inogamuchirwa seyokurapa here?
Zvigadzirwa zveCDD hazvisati zvayedzwa neDFA yekurapa chero hosha kana hurwere. Izvi hazvireve kuti CBD haishande - zvinongoreva kuti vanhu havabvumidzwe kuita zvirevo zvekurapa nezve kugona kwayo kuongorora kana kurapa chero zvirwere. Kunyangwe iwe uchikwanisa kutenga CBD zviri nyore pamusoro pekambani, unofanirwa kuonana nachiremba wako usati waishandisa pakurwadziwa kana chero imwe nyaya yekurapa.
Mafuta eCDD akanaka here paganda?
Pakutanga Yakatumirwa pa https://www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-oil-for-skin
Cannabidiol (CBD) chinhu chakasikwa chinobva mumuti wecannabis. Humwe humbowo hunoratidza kuti CBD oiri inogona kubatsira kune hutano hweganda uye yakashandiswa kune akasiyana mamiriro eganda.
Share musi Pinterest
CBD chinhu chemakemikari chiripo mu Cannabis sativa chirimwa. Vagadziri vanogona kusanganisa CBD nemafuta, senge hemp kana kokonati mafuta, kugadzira CBD mafuta. Vanhu vanogona kutenga CBD mafuta kana huwandu hwerunako zvigadzirwa izvo zvinosanganisira CBD mafuta ekushandisa pane avo ganda.
Nekuda kweayo anokwanisa kurwisa-kupisa zvivakwa, CBD inogona kubatsira pakurapa akawanda mamiriro eganda, kusanganisira acne, eczema, uye psoriasis.
Muchikamu chino, tichakurukura chinonzi CBD mafuta, ndeapi mamiriro eganda angave anobatsira, uye mashandisiro eCDD oiri.
Zviri pamutemo CBD? Hemp-inotorwa CBD zvigadzirwa zvine isingasviki 0.3% THC zviri pamutemo federally asi zvakadaro zvisiri pamutemo pasi pemimwe mitemo yenyika. Zvigadzirwa zveCannabis-zvinobva kuCannabis, kune rumwe rutivi, zviri pamutemo zvisiri pamutemo asi zviri pamutemo pasi pemimwe mitemo yenyika. Tarisa mutemo wemuno, kunyanya kana uchifamba. Zvakare, ramba uchifunga kuti Kudya neDrug Administration (FDA) haina kubvumidza isina kunyoreswa zvigadzirwa zveCBD, izvo zvinogona kunyorwa zvisiri izvo.
Chii chinonzi CBD mafuta?
CBD ndeimwe yemazhinji ma cannabinoid anowanikwa mune iyo cannabis chirimwa. Imwe inozivikanwa cannabinoid ndeye delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). THC mubatanidzwa unokonzeresa "wepamusoro" uyo vanhu vangangobatana necannabis. CBD yoga haizoiti kuti munhu anzwe kumusoro.
Dzidza zvakawanda nezve mutsauko uripo pakati peCDD neTC pano.
Mhando dzakasiyana dzezvirimwa zvecannabis dzine mazinga akasiyana e cannabinoids. Kazhinji, hemp zvirimwa zvine zvakawanda zvakanyanya CBD uye inenge isina THC, ndosaka mafuta mazhinji eCBD achibva kuindasitiri hemp.
Dzidza zvakawanda nezve mutsauko uripo hemp CBD uye cannabis CBD pano.
Kazhinji, vagadziri vanoshandisa kupisa kutora CBD kubva kune cannabis chirimwa uye kuisanganisa neinotakura mafuta kugadzira CBD mafuta. Vamwe vanogona kushandisa doro kugadzira CBD tincture.
CBD mafuta anouya musimba zhinji dzakasiyana, uye vanhu vanogona kuishandisa nenzira dzakasiyana siyana. Semuenzaniso, vanogona kurizora chairo paganda, voisa donhwe pasi perurimi rwavo, kana kurisanganisa nemafuta kana mafuta ekuzora.
Muviri wemunhu une network yakaoma yeanaurotransmitters uye cannabinoid receptors inozivikanwa seye endocannabinoid receptor system (ECS)Yakavimbika Tsime. Kutsvagurudza kunoratidza kuti cannabinoids uye iyo ECS inogona kutora chinzvimbo mune dzakawanda maitiro emuviri uye kuti ganda rine rakavimbika mabviro cannabinoid receptors.
Inoshanda kune ganda here?
tsvakurudzoYakavimbika Tsime inoratidza kuti CBD mafuta anogona kubatsira kune akati wandei akasiyana mamiriro eganda. Izvi zvinogona kusanganisira:
Acne ndiyo yakajairika ganda mamiriro akavimbika mabviro muvanhu. CBD ine akawanda macomputer ane mafuta-kudzikisira, anti-kupisa, uye antimicrobial zvivakwa zvinogona kubatsira kugadzirisa acne.
Chidzidzo cha2014 chakavimbwa mabviro yakaongorora mhedzisiro yeCDD pane vanhu sebocytes. Aya ndiwo maseru anogadzira sebum, inova waxy, chinhu chine mafuta icho ganda rinogadzira.
Ipo sebum ichibatsira kuchengetedza ganda redu, sebum yakanyanyisa inogona zvakare kukonzera acne. Chidzidzo ichi chinoratidza kuti CBD inogona kudzivirira sebocytes kubva mukugadzira sebum yakawandisa.
Ongororo ya2016 yakavimbika mabviro inocherekedza iyo inogona kurwisa mabhakitiriya uye antifungal zvimiro zvemuti wecannabis. Izvi zvinogona kubatsira kudzivirira acne nekuda kwehutachiona paganda.
Ongororo ye2019 inoratidza kuti CBD inogona zvakare kubatsira pakurapa kuoneka kweacne mavanga.
Dzidza zvakawanda nezveCDD neacne pano.
Kuoma uye kuchenesa
A 2019 kudzidza kuvimbwa mabviro inocherekedza kuti CBD inogona kubatsira pakurapa zvimwe zvinowanzoonekwa zveganda mamiriro, sekuoma uye kuchenesa. Iwo anti-anogumbura zvivakwa anovimbwa nawo mabviro yeCDD inogona kunyanya kubatsira mukuderedza zvinogona kukonzera eczema, dermatitis, uye psoriasis.
Sezvo CBD oiri inogona kubatsira kudzikamisa ganda uye kudzikisa kutaridzika kwekutsamwa, zvinogona kubatsira kune vanhu vane ganda rakapfava.
Dzidza zvakawanda nezve CBD uye psoriasis pano.
CBD Yekuchembera uye kuunyana
Chidzidzo cha2017 chakavimbwa mabviro inosimbisa iyo antioxidant zvimiro zveCDD. Kunyanya kunetseka kunetsekaYakavimbika Tsime inogona kubatsira mukukwegura. Naizvozvo, iyo antioxidant uye anti-kupisa zvivakwa inovimbwa mabviro yeCBD inogona kubatsira kudzivirira kutaridzika kwekukwegura muganda.
CBD Anti Kuchembera Cream
Sezvo chirimwa checannabis chingave chine chivimbo mabviro antibacterial uye antifungal zvivakwa, zvinogona kubatsira pakurapa hutachiona paganda.
Kuti uwane rumwe ruzivo uye zviwanikwa paCDD uye Zvigadzirwa zveCDD zveganda, ndapota shanyira nzvimbo yedu yakatsaurirwa.
Sekureva kwesangano reWorld Health Organisation (WHO)Yakavimbika Tsime, vanhu vanowanzo tsungirira CBD zvakanaka. Nekudaro, mimwe mhedzisiro inowanzoitika yeCDD, inogona kuve inoenderana nedosi, inogona kusanganisira yakavimbika mabviro:
kuchinja mukudya uye kuyerwa
Izvo zvakakoshawo kuziva kuti CBD inogona kudyidzana nayo Yakavimbika Tsime nemimwe mishonga, saka zvakakosha kuti vanhu avo parizvino vanotora mishonga yemishonga vanotaura nachiremba wavo vasati vashandisa chero zvigadzirwa zveCBD.
Nechero chigadzirwa cheCDD, zvakakosha kuti uteedzere iwo marongedzero ari pachiratidzo nekurongedza kuti uone kuti kangani kushandisa chigadzirwa, kuwanda kwekushandisa, uye maitiro ekuchishandisa.
Vanhu vanogona kuisa CBD mafuta uye zvigadzirwa zvekunaka zvine CBD mafuta zvakananga kuganda.
Dzidza zvakawanda nezve CBD misoro pano.
Kuti utore CBD oiri nemuromo, vanhu vanogona kuisa madonhwe mashoma pasi perurimi rwavo, kwavanogona kubata mafuta kwemineti imwe vasati vamedza.
Muyero unosiyana zvichienderana nehuremu hwemunhu uye simba remafuta eCBD. Vanhu vatsva kuCDD vanofanira kutanga neyero yakaderera inogoneka. Kana vangoziva maitiro anoita muviri wavo kuCBD, vanogona kuwedzera zvishoma nezvishoma muyero.
Verenga zvimwe nezve chaiyo madheji eCDD pano.
Chikafu neDrug Administration (FDA)Yakavimbika Tsime haina parizvino kutonga zvigadzirwa zveCDD. Naizvozvo, tinokurudzira kuti vanhu vatsvage zvigadzirwa zvemafuta eCBD izvo:
isina zvinopfuura 0.3%Yakavimbika Tsime THC, maererano neMutemo Wekuvandudza KwekurimaYakavimbika Tsime
vane humbowo hwechitatu-bato kuyedzwa neIO / IEC 17025-yaka zivikanwa murabhoritari
pasa bvunzo dzezvipembenene, simbi dzinorema, chakuvhuvhu, uye utachiona
pfuura chigadzirwa chigadzirwa potency uye chengetedzo kuyedzwa
havasi vanobva kukambani inoenderana netsamba yekunyevera yeDFA mabviro
vanobva kukambani inopa zvitupa zvekuwongorora (COAs) kune zvavo zvese zvigadzirwa
Pamusoro pezvo, vanhu vanogona zvakare kufunga:
mutengesi uye mukurumbira wemugadziri
Mimwe mishonga yeganda yakasikwa
Mimwe mishonga yechisikigo yeganda inogona kubatsira hutano hweganda kana kudzikisa zviratidzo zveganda mamiriro anosanganisira:
Aloe vera inoyevedza moisturizer uye ine anti-kupisa, antimicrobial, uye ronda-kupora zvivakwa. Zvidzidzo kubva muna2014 na2017 zvinoratidza kuti aloe vera inogona kudzora zviratidzo zvemaviri acne uye psoriasis.
Ongororo ya2012 yakavimbika mabviro inocherekedza kuti huchi hwakaratidza kunyorovesa, kuporesa, uye anti-kupisa zvimiro. Ongororo ya2016 inoratidza kuti inogona zvakare kuwedzera immune system, nepo 2017 ongororo yakavimbika mabviro inoratidza kuti huchi hunogona kurapa kutsva nemaronda.
Chinyorwa cha2016Yakavimbika Tsime inotsanangura kuti mafuta ekokonati ndiwo mushonga unoshanda kune rakaoma ganda, sezvo ichigona zvakanyanya kugadzirisa ganda hydration. Chidzidzo che2019 chinotaura zvakare kuti coconut mafuta anokwanisa kuchengetedza ganda nekurwisa kuzvimba uye nekuvandudza hutano hweanodzivirira ganda.
mafuta Tea muti
Ongororo ya2013 yakavimbika mabviro inoratidza anti-kuzvimba, inorwisa mabhakitiriya, uye ronda-kupora zvimiro zvemuti wetii. Ongororo ya2015 inotaura kuti mafuta emuti wetii mushonga unoshanda weacne, ichideredza huwandu hwezvironda zveacne mune vanhu vane hunyoro kusvika pakati nepakati acne.
Kutsvagisa kunoratidza kuti CBD mafuta anogona kunge akashandiswa sekurapa kweakasiyana mamiriro eganda, senge acne, dermatitis, uye psoriasis. Izvi zvinokonzerwa nekugona kwayo kurwisa-kuzvimba, antibacterial, uye antioxidant zvivakwa.
Vanhu vanogona kushandisa oiri yeCBD yakanangana neganda ravo, kuishandisa, kana kushandisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, senge mafuta ekuzora kana mafuta, ane CBD mafuta.
* Aya mazwi haana kuongororwa neKudya neDrug Administration. Izvi zvigadzirwa hazviitirwe kuongorora, kurapa, kuporesa kana kudzivirira chero chirwere.
Medical Mhinduro nezve Delta 8 THC uye Delta 10 THC Kubva Kutenderedza Internet
Mutsvuku Emperor Collective